Maxaa dhacaya haddii duufaan qorraxda ku dhufato Dunida? | Saadaasha Shabakadda
Maxaa dhici lahaa haddii duufaan qoraxda ku dhufato Dunida?
Maanta waxaan ku tiirsannahay koronto wax walba, markaa waxaa laga yaabaa inaan isweydiinno haddii aan awoodi karno inaan nolol caadi ah ku socono haddii duufaan qorraxdu ku dhacdo dhulka. Way adkaan lahayd, sax? Inkastoo nasiib wanaag ma jirto wax muujinaya in wax sidan oo kale ah dhici doonaan sannadaha soo socda, madaxweynaha Mareykanka, Barack Obama, ayaa bilaabay inuu qaado tallaabooyin taxaddar ah.
Laakiin waa maxay sababta? Maxaa ku dhici lahaa Dhulka haddii duufaan qorraxdu ku dhacdo?
Dhulkeenna waxaa "lagu ilaaliyaa" xariiqyo badan oo aan la arki karin oo ka soo baxa bartamaha ilaa xadka ay ku taal dabaysha qorraxdu. Khadadkaas ayaa loo yaqaan Dhulka magnetka dhulka ama geomagnetic field. Tani waxay isbeddelaysaa waqti ka dib iyada oo ay sabab u tahay dhaqdhaqaaqa isku-dhafka birta la dhalaalay ee laga helay xudunta sare ee meeraha. Marka sidaas la samaynayo, tiirka woqooyi wuu socdaa, inkasta oo uu si tartiib tartiib ah oo uusan noogu qasbeynin inaan si joogto ah u hagaajino compassyadeenna. Xaqiiqdii, labada tiir si ay dib ugu noqdaan, boqolaal kun oo sano ayaa laga gudbaa.
Qorraxda ka waran? Boqorkayaga xiddiggu wuxuu na siiyaa iftiin iyo diirimaad, iyo waliba muuqaal qurux badan oo aan sinnayn: Nalalka Woqooyi. Laakiin waqti ka waqti waxaa jira duufaanno qorraxeed, oo macnaheedu yahay taas qarax ayaa ka dhaca cimilada qorraxda, oo ka dhalata qurubyo tamar leh oo dhex gala aagga magnetka. Tani waa dhacdo aan la iska ilaalin karin, laakiin waa la saadaalin karaa inay yareyn karto waxyeelada suurtagalka ah.
Haddii ay dhacdo noocan oo kale ah dhacdo, Dhammaan nidaamyada booska adduunka (GPS), Internetka, taleefanka, iyo nidaam kasta oo elektaroonig ah way saameyn doontaa. Marka la soo koobo, waxaan la kulmi lahayn dhibaatooyin badan oo aan ku sii wadi karno nolosha aan hoggaamineyno, in kastoo aysan noqon doonin markii ugu horreysay. Midkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa 1859, in kastoo waagaas aysan laheyn Internet ama GPS, hadana waxay ahayd dhowaan (1843) markii la sameeyay shabakado telegraph oo dhowr jeer ay kala go'een.
Hadday maanta dhici laheyd, waxyeelada ayaa aad uga sii muhiimsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Maxaa dhici lahaa haddii duufaan qoraxda ku dhufato Dunida?
VIDEO: Onkod qiiro leh ayaa iftiiminaya Folkaanaha Popocatepetl